न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड्स विशेष : यो सम्मान सम्पूर्ण उद्यमशील महिलाका लागि हो
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) अन्तरवार्ता
नेपालको पहिलो बुटिक होटल ‘द्वारिकाज’की संस्थापक अम्बिकाले श्रेष्ठ न्यू बिजनेश एज प्रालिद्वारा प्रदान गरिने लाइफलाइम एचिभमेन्ट इन लिडरशिप अवार्ड–२०१९ प्राप्त गरेकी छिन् । उमेरले ८७ वर्ष पुगेकी श्रेष्ठ अहिले पनि आप्mनो व्यवसायमा सक्रिय छन् । सन् १९३३ फेब्रुअरी १२ मा भारतको सिक्किममा जन्मिएर त्यहीँकै लारेन्टो स्कूलमा प्रारम्भिक शिक्षा तथा पटना विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकी उनी महिला उद्यमशीलता विकास तथा सम्पदा संरक्षकको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील छन् । प्रस्तुत छ, अवार्डबाट सम्मानित भएपछि उनीसँग गरिएको कुराकानीको सार :
‘लाइफलाइम एचिभमेन्ट इन लिडरशिप अवार्ड २०१९’ अवार्ड प्राप्त गर्नुभयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो मेरा लागि गर्वको विषय हो । तर यो अवार्ड मैले मेरा लागि भन्दा पनि सम्पूर्ण उद्यमशील महिलाका लागि हो भन्ने बुझेकी छु । नेपालमा उद्यम गर्न त्यसै पनि कठिन छ । त्यसमा पनि महिलालाई त झनै गाह्रो छ । यो अवस्थामा मैले प्राप्त गरेको यो सम्मान उद्यममा निरन्तर लागिरहनु भएका आम महिला उद्यमीमा समर्पित गर्न चाहन्छु ।
द्वारिकाज होटलको खास विशेषता के हो ?
हामीले नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट यसको निर्माण गरेका छौं । हामीले गुणस्तरीय पर्यटकलाई बढी जोड दिएका छौं । नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण सहितको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु नै हाम्रो विशेषता हो ।
यो मौलिक होटलको अवधारणा कसरी आयो ?
मेरो बिहेपूर्व नै श्रीमान्ले न्यूरोडमा पारस होटल शुरू गर्नुभएको थियो । पछि काठमाडौं ट्राभल एजेन्सी पनि शुरू गर्‍यौं । काठबाट बनेका कलात्मक झ्याल, ढोका र यस्तै अन्य सामान भेट्टायो कि उहाँ (श्रीमान्) जम्मा पार्ने गर्नुहुन्थ्यो । यसरी थुपार्दै गर्दा एउटा गाई गोठ र ग्यारेज जस्तो स्थान बनेको थियो । पछि एउटा विदेशी पाहुनाका लागि पढ्न बनाइएको एउटा कोठासँगै अरू थप्दै र परिमार्जन गर्दै १० कोठाबाट यो होटल सञ्चालन गरिएको थियो । हाल ८३ कोठा छन् । होटलकै व्यवस्थापनमा काभ्रेको धुलिखेलमा द्वारिकाज रिसोर्ट समेत सञ्चालनमा छ । त्यो पनि प्रकृति र संस्कृतिको अर्को सम्मिश्रण हो ।
यो उमेरमा पनि यस प्रकारको सक्रियता कसरी सम्भव भयो ?
(हाँस्दै) हरेक काममा अठोट जरुरी छ । हाम्रो पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनाको कारण महिलालाई घरबाहिर निस्केर काम गर्न गाह्रो छ । त्यसका लागि पारिवारिक साथ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शुरूमा मेरै श्रीमान्को सहयोगमा मैले आफ्ना दिनहरू खर्चें । उहाँपछि सबै जिम्मेवारी मेरै काँधमा आयो । र, अहिलेसम्म पनि काम गरेकै छु । त्यसै बस्न मन लाग्दैन । काम गरिरहेको बानीले पनि होला, अझै क्रियाशील नै छु । यद्यपि मसँगै अहिले मेरो छोरी र
नाती समेत यो व्यवसायमा संलग्न छन् ।
नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ, सरकारले सहयोग गर्दैन भन्ने छ । तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
त्यो पक्कै हो । सरकारले प्रोत्साहन गर्ला र काम गर्छौं भन्यो भने गाह्रो नै छ । तर सरकारको मुख ताकेर केही हुँदैन । आफै केही गर्ने जाँगर चलाउनुपर्छ । नेपाल अझै व्यवसायका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ नै छ । नेपालमा जे व्यवसाय गरे पनि सफल हुन सकिन्छ ।
द्वारिकाज होटलका भावी योजना के छन् ?
पर्यटनभन्दा बाहिर जाने सोच छैन । भएकोलाई राम्रो कसरी बनाउने भन्ने हो । नयाँ पुस्ता आएको छ । केही नयाँ सोच ल्याउने जिम्मा उनीहरूको हो । हामीले त सक्दो गर्‍यौं ।
मंगलवारबाट मौसम क्रमिक सुधार हुँदै जाने